Mareykanka oo sheegay in ay duqeyn ku dileen sargaal sare oo Al-Shabaab ah oo gacan ka geystay weerarkii saldhiga Manda Bay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in ay duqeyn ku dileen sargaal sare oo Al-Shabaab ah oo gacan ka geystay weerarkii saldhiga Manda Bay
February 26, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqeyn Mareykanku uu ka fuliyay gudaha Soomaaliya ayaa lagu dilay sargaal sare oo katirsan Al-Shabaab kaasoo gacan ka geystay weerarkii bishii hore ee saldhiga Mareykanka ee Kenya, sida ay sheegeen milatariga Mareykanku Talaadadii.
Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in duqeynta oo dhacday Sabtidii lagu dilay xubin sare oo katirsan Al-Shabaab kaasoo masuul ka ahaa qorsheynta iyo hagida howlgalada maleeshiyada ee gobolka xadka ee Kenya, uuna kamid yahay weerarkii dhawaan lagu qaaday saldhiga Manda Bay.
Xaaskiisii ayaa sidoo kale lagu dilay duqeynta, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka AFRICOM.
Weerarkii saldhiga Manda Bay ayaa dhacay 5-tii Janaayo, waxaana lagu dilay saddex qof uu dhashay Mareykanka, oo mid uu ahaa askari halka labada kale ay ahaayeen qandaraaslayaal.
Weerarkaas kadib, milatariga Mareykanka ayaa ciidamo dheeri ah geeyay Kenya, oo xuduud la leh Soomaaliya.
AFRICOM ayaa 63 duqeymood ka fulisay Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay oo ay ku bartilmaameedsanayso maleeshiyada Al-Shabaab. Sanadkan waxay ilaa iyo hadda qaadeen 18 weerar oo dhanka cirka ah.
January 6, 2020 Milatariga Mareykanka oo xaqiijiyay in saddex qof oo Mareykan ah lagu dilay weerarkii saldhiga Kenya
Masar oo qalab militari ugu deeqday Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah taageero militari ka heshay dowlada Masar . Safiirka Masar u qaabilsan dalka Soomaaliya Waliid Maxamed Ismaaciil ayaa taageeradaas ku wareejiyay wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Cabduqaadil Shiikh [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa joojintii ka qaaday doorashada Garoowe ka socota ee xildhibaanada aqalka hoose, taasoo daba socotay amar uu madaxweyne ku-xigeenka Puntland soo saaray Isniintii oo uu ku joojiyay [...]